Shiinaha Warshad Soo Celin Biyo-Xidheen &. | Dingtaisheng
Qeybinta qulqulka socodka biyaha:
Adoo ku beddelaya jihada socodka biyaha markabka soo noqnoqda, socodka biyaha oo isku mid ah ayaa lagu gaaraa meel kasta oo jihada toosan iyo toosan. Nidaam ku habboon in biyaha loogu kala firdhiyo bartamaha saxaarad kasta oo badeecadeed si loo gaaro jeermis madhan oo aan dhammaad lahayn.
Daaweynta waqtiga gaaban ee heerkulka sare:
Nadiifinta waqtiga gaaban ee heerkulka sare waxaa lagu sameyn karaa iyadoo lagu diiriyo biyaha kulul haanta biyaha kulul horay loo sii kululeeyo heerkulka sare si loo nadiifiyo
Ku habboon weelasha si fudud u liita:
Sababtoo ah biyuhu waxay leeyihiin rogmasho, waxay ku sameyn karaan saameyn aad u wanaagsan oo difaac ah weelka ku hoos jira heerkulka sare.
Ku habboon qabashada baakadaha waaweyn ee cuntada qasacadaysan:
Way adag tahay in la kululeeyo oo la nadiifiyo qeybta dhexe ee cuntada waaweyn ee gasacadeysan waqti yar gudahood iyadoo la adeegsanayo soo noqnoqoshada taagan, gaar ahaan cuntada leh nafaqeeda sare.
Wareegtada, cunnada nafwaayaha sare leh ayaa si siman loogu kululeyn karaa xarunta muddo gaaban gudaheeda, laguna gaari karaa saameyn nadiifin jeermis dhal ah. Biyo qulqulaya ee heerkulka sare ayaa sidoo kale door ka ciyaaraya ilaalinta baakadaha wax soo saarka inta lagu jiro howlaha wareejinta.
Dambiilaha buuxa ee lagu rakibo ku dheji 'Retort', xir albaabka. Albaabka jawaab celinta wuxuu kuxiran yahay seddex geesoodka amniga si loo damaanad qaado amniga. Albaabku si farsamaysan ayuu u xidhan yahay inta hawshu socoto oo dhan.
Nidaamka nadiifinta ayaa si otomaatig ah loo fuliyaa iyada oo la raacayo habka loo yaqaan 'PLC' ee xakamaynta micro micro processing.
Bilowga, biyaha heerkulka sare ee haanta biyaha kulul waxaa lagu duraa weelka dib u celinta. Ka dib marka biyaha kulul lagu qaso sheyga, waxaa si isdaba joog ah loogu dhex wareejiyaa matoorka biyaha qulqulka badan iyo tuubada biyo qaybinta si cilmiyaysan loo qaybiyay. Uumiga waxaa lagu duraa mashiinka uumiga biyaha si ay alaabtu u sii waddo kuleylka iyo nadiifin.
Qalabka wareejinta dareeraha dareeraha ee markabka retort wuxuu gaaraa isku socod isku mid ah meel kasta oo jihooyinka toosan iyo kuwa toosanba ah iyadoo loo badalayo jihada socodka markabka, si loo gaaro qeybinta kuleylka oo aad u fiican.
Geedi socodka oo dhan, cadaadiska ku jira markabka retort-ka waxaa xukuma barnaamijka si loogu durto ama loo sii daayo hawo otomaatig ah markabka. Maaddaama ay tahay jeermis-dilidda biyaha, cadaadiska gudaha markabka saameyn kuma yeelanayo heerkulka, cadaadisna waxaa lagu dejin karaa iyadoo la raacayo baakadaha kala duwan ee alaabooyinka kala duwan, taasoo ka dhigeysa nidaamka mid si ballaaran loo adeegsan karo piece 3 gabal, 2 gabal, baakado dabacsan, baakado caag ah iwm ）
Tallaabada qaboojinta, dib u soo kabashada biyaha kulul iyo beddelidooda ayaa loo dooran karaa inay ku soo ceshadaan biyaha kulul ee la nadiifiyay ilaa haanta biyaha kulul, sidaasna ay ku badbaadiso tamarta kuleylka.
Marka hawshu dhammaato, waxaa la soo saari doonaa digniin digniin ah. Albaabka fur oo ka dejiso, ka dibna u diyaari dufcadda xigta.
Isku mid ahaanta heerkulka qaybinta markabka waa ± 0.5 ℃, cadaadiskana waxaa lagu xakameynayaa 0.05 Bar.
Dhalada caaga ah baaquli / koob
Xirmooyinka waaweyn oo dabacsan Duub baakadaha dahaadhka ah
Caanaha: Daasadda daasadda, dhalada caagga ah, baaquli / koob, dhalada dhalada / weelka, baakadaha kiishka ee dabacsan
Hilibka wax lagu duubo ee dabacsan, digaagga, bolse
Kalluun baako dabacsan oo ballaaran, cuntada badda
Baakado waaweyn oo dabacsan oo diyaar u ah inay cunaan cunto
Hore: Dhinacyadu waxay buufiyaan jawaab celin
Xiga: Soo Celinta Tooska ah ee Tooska ah
Dib-u-Celinta Biyo Gelinta otomaatiga ah
Ahama Birta Quusin Bixinta
Biyo-mareenka Soo Celinta Sterilizer
Biyo-gelinta Rotary Autoclave Retort